UKULOBA! Ubutofotofo! I-Trinity River Retreat emlanjeni - I-Airbnb
UKULOBA! Ubutofotofo! I-Trinity River Retreat emlanjeni
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguEric
I-Trinity River Retreat zinobuhlobo, izindlu zamaplanga ezitofotofo kunye noMlambo i-Trinity emnyango. Kwakhona unokusetyenziswa okupheleleyo kwamahektare ayi-3 omhlaba.
Indawo yokuhlamba impahla epheleleyo, iindawo zomlilo ezitofotofo, izixhobo zokufudumeza indawo yombane, umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu kunye namakhitshi amiswe kakuhle. Iinkuni zokubasa, iitawuli, izinto zokuhlamba nekhitshi ziqukiwe zonke. Sine-WiFi engenamida kunye nomlambo kunye ne-creek zisemnyango wakho. Ilungele umlobi kunye neentsapho.
I-Trinity River Retreat ixabisa iindwendwe eziyi-4. Undwendwe ngalunye olongezelelekileyo lubhataliswa i- $ 20 ngomntu ngamnye ngosuku.
Iipati nemicimbi ayivumelekanga.
Le ndawo inezindlu zamaplanga ezinkulu eziyi-2. Indlu yamaplanga nganye inekhitshi elipheleleyo, indlu yangasese epheleleyo, izixhobo zokufudumeza indawo yombane, indawo yokubasa umlilo, iibhedi ezinkulu eziyi-2 ezenziwe ngekhompyutha kunye ne-TV.
Ezi zindlu zamaplanga zidityaniswe neminyango emibini yasemva kwezinto eziyimfihlo.
Kukho negesi enkulu kunye namalahle acocekileyo aneeseti zokutyela phandle kunye nemigqomo yomlilo emlanjeni. Kunye nesikhululo sokucoca intlanzi nomdlalo.
Sisebenzisa i-100% yezikhokelo zokuloba zasekuhlaleni ezinamava kakhulu kwiTrinity River. Umlambo i-Trinity uthule, kodwa usenezo zinto zokuzonwabisa ezintle nezivuyisayo zokuqhuba isikhephe, i-tubing nokuloba. I-Trinity River inezilwanyana zasendle ezimangalisayo ezifana ne-elk, i-deer, ibhere, ii-otters zomlambo kunye neentaka ezintle, ezifana neBald kunye neGolden eagles. Intlanzi efana neSalmon, iJamani Brown trout, kunye nentloko yentsimbi.
Ichibi leTrinity: Imizuzu eyi-30 xa
uqhuba Ichibi eliyiLew: imizuzu eyi-20 xa
uqhuba Ichibi ledolophu leWhiskey: imizuzu eyi-30 ngemoto
Ibhulorho yeSundial: imizuzu eyi-35 xa uqhuba
\_u00A0Iibhedi ezinkulu eziyi-2, 1 iisofa eziyi-
4.95 · Izimvo eziyi-185
I-Trinity River Retreat ikwindlela yeFama yoMlambo eDouglas City eCalifornia. Le ndawo ilungele abantwana nabantu abadala ukuba bajikeleze bekhuselekile bengakhange benzakala. Sisekude ngeemayile eziyi-1/4 ukusuka kwindawo enesikhephe esiyi-Indian Creek kunye neIndiya Creek lodge & Cafe. Ukuba ukhangela indlela yokunyuka intaba, isixeko saseDouglas sineendlela ezininzi ibe ezinye zazo ziindawo apho kwafunyaniswa igolide okokuqala ibe zininzi kakhulu ezi ndlela eWeaverville nezinye iindawo ezininzi.
Sisoloko sikulungele ukuphendula nayiphi na imibuzo.